Luluphi udaba lokuBalisa iBrand kunye nendlela yokufaka isicelo kuYilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Luluphi udaba lokuBalisa uBrand kunye nendlela yokufaka isicelo kuYilo
Ukuba awulazi ixesha, Ukubalisa amabali eBrand kubhekisa kwisicwangciso sokuthengisa isetyenziswa ziimpawu ukuvelisa uvelwano olukhulu kunye nomthengi. Njengoko igama lisitsho, Kukubalisa ibali elichaza inkampani, injongo yayo okanye umbono wayo, ukuyinika umntu ukuba ayichukumise okanye ayichukumise into enokuqhagamshela ngokuthe ngqo kwiimvakalelo zabaphulaphuli.
Le ndlela ifuna ukwahlukana neendlela zokuthenga nokuthengisa ngokwesiko ezijolise kuphela kwimveliso nakwizibonelelo zayo. Endaweni yoko, xelela ibali lenkampani yakho kumthengi Bhenela ukuzithemba kwabo kwaye bakunike ukuthembeka. Kwangelo xesha, banjani kulula ukuyikhumbula nokubala, kunokwenzeka ukuba umyalezo udlule kwaye unqamleze, oya kukunceda wandise abathengi bakho.
Imbali yophawu akufuneki ukuba ibenzima kakhulu okanye icace, endaweni yoko, ilula kwaye inentsingiselo ngakumbi, kokukhona iya kuba nefuthe eluntwini. Emva kokuba eli bali lichaziwe, kufuneka lifakwe ngokubonakalayo. Ubunzima kunye ukubaluleka komfanekiso ocacileyo mayisasazwe izakufana nebali ngokwalo.
Ukuguqulela ibali kulwimi olubonakalayo loyilo lwegraphic, kuya kufuneka uqale wazi ukuba zeziphi izinto eziphambili oza kuthi uqaqambise.
1 Lingantoni ibali
2 Phanda ukuba ngubani ukhuphiswano lwakho
3 Chaza into oyifunayo
4 Qalisa ukuyila
Into yokuqala ekufuneka uyenzile Ukuchonga ukuba lingantoni eli bali. Ngokuqhelekileyo, izihloko zilandelayo:
La ibali Kwintengiso
Baqhuba njani umsebenzi wabo
El loluntu kubhekiswa kubo
Yintoni ebenza eyahlukileyo kukhuphiswano
Yini i khuthaza
Imiqobo ukuba boyisile
Imiceli mngeni ukujongana nexesha elizayo
Ezi zezimbalwa zezona zixhaphakileyo, kwaye ibali elinye alifanelanga ukuba ligubungele zonke. Uza kusebenzisa kuphela abo banzima okanye yongeza ixabiso kwaye inokubamba ingqalelo yabathengi.
Umzekelo yi logo ye Uphawu lwe-Unilever. Ileta U yenziwe ziimpawu ezingama-25 zimele iimveliso zenkampani, amaxabiso kunye nezixhobo. Ukusuka embizeni yekrimu okanye i-ayisi khrim ezinye zeemveliso zabo, kwintaka kunye ne-icon yokurisayikilisha ukufuzisela inkululeko kunye nokuzibophelela kwabo kwindalo esingqongileyo.
I-logo yohlobo lwe-Unilever ineempawu ezingama-25 xa zizonke.
Omnye umzekelo yi Starbucks uphawu lophawu. Igama lathathwa kumlinganiswa okwincwadi yenoveli uMoby Dick, kunye nomfanekiso ocacileyo woluhlobo ebesoloko enalo yenzelwe ukubonisa isiko laselwandle labathengisi bekofu bokuqala. Kungenxa yoko le nto ilogo Imelwe yimarmy enemisila emibini. Emva kwexesha, xa uphawu lwadityaniswa nenye inkampani yekofu ebizwa ngokuba yiIl Giornale, ilogo yokuqala yadityaniswa naleyo yenkampani yokugqibela, kukhokelela kule siyibonayo namhlanje. Isishwankathelo, iNqaku leNqaku leBrand lolu hlobo lubonisa Imbali yayo kunye nokuphefumlelwa kwayo.
Iimpawu ezindala nezintsha zohlobo lweStarbucks.
Phanda ukuba ngubani ukhuphiswano lwakho
Fumanisa Zeziphi iimveliso ezikhuphisanayo kunye neyakho kwaye uvavanye wahluke njani kubo, y zeziphi izinto abazisebenzisileyo ukuzisa iNqaku lakho leNqaku leBrand ebomini ngokuyilwa kwemizobo.
Nje ukuba uchaze oku, unako ukuphucula izinto ezikwenza wahluke, ukuze ibali olibalisayo lingafani ngokufanayo okanye lidideke nenye inkampani.
Umzekelo unokuba zezi zinto zilandelayo: Clinique kunye neFama. Zombini zibonelela ngemveliso efanayo, zonke iintlobo zezithambiso, iisepha, iikhrim kunye nokwenza izithambiso. I-Clinique igxile kwi umgangatho ophezulu, izithambiso ezingenawo amavumba aluhlaza. Bano Abaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokubanzi. Ifama, igxile ekuveliseni izinto zokuthambisa ezisekwe kumacandelo endalo akhuliswe kwiifama zabo. Abona bantu kujoliswe kubo icacile ngakumbi, abantu abanomdla ngakumbi ekuthengeni okunoxanduva kwaye uzibophelele kwinjongo yendalo esingqongileyo.
Imveliso yohlobo lweClinque.
Iimveliso zohlobo lwefama
Lo mahluko iqatshelwe kwifayile ye- Ukuphuhliswa kwesazisi ngasinye. I-Clinique ibalaselisa umgangatho weemveliso zayo kwinqanaba lesikhumba kwaye liyidibanisa nembonakalo enemfashini kunye nemibala, ngelixa i-Farmacy ibalaselisa izinto zendalo zezinto ezisebenzisayo kwaye ibandakanya neefowuni zomthi ekupakisheni nakwimifanekiso yeentyatyambo.
Chaza into oyifunayo
Into elandelayo ekufuneka uyenzile yile Chaza ukuba zeziphi izinto ofuna ukuzibalisela ibali lakho gcwalisa: ilogo, ukupakisha, iibhilibhodi, iwebhusayithi, imidiya yoluntu. Kuya kufuneka ucwangcise amajelo aza kuthi abaliselwe ibali kwaye ufuna ukuba livele njani.
Umzekelo, i Uphawu lweLlinfox yinkampani yokunxiba eyenziwe kuphela nge-Oeko-Tex Linen, uhlobo lwelaphu elingenayo nayiphi na into eyityhefu. Umsebenzi wabaseki bayo kukuba Impahla ilula, yomelele, isemgangathweni kwaye izinzile. Bona ngokwabo bayichaza njengelula kunye nengqwabalala. Ilula nje iwebhusayithi yabo inokubonakala ngathi, izalisekisa ngokugqibeleleyo into abafuna ukuyidlulisa, ukulula kunye nokulandelelana. I-logo ayilayiswanga kakhulu kwaye ileta ndiyidlala kancinci ukukhupha njengelaphu.
Ukuba zonke izinto esizisebenzisayo kwinqanaba lomzobo ziyavumelana nebali esifuna ukulihambisa, Akukho mntu uza kubuza ingqibelelo kunye nokuthembeka kwegama lethu.
Linenfox uphawu lwewebhusayithi.
Ngokuchaza zonke izinto zangaphambili, ngoku unokukhangela izinto ekubhekiswa kuzo, amagama aphambili, imifanekiso, imibala, ukwenziwa, iifoto, njl. ngokwegama lakho kwaye ukusuka apho, ekuphela kwento eseleyo yile qalisa ukuyila uchazo olubonakalayo olukuthi ngokuqinileyo nangokungaguquguqukiyo ulingana neNdaba yakho yokuBalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Luluphi udaba lokuBalisa uBrand kunye nendlela yokufaka isicelo kuYilo
UJorge Rodriguez sitsho
Molo ngale ntsasa yam yokuqala kwiwebhusayithi yakho, kwaye ndiyifumana iluncedo kakhulu. Ndingumntu othanda intengiso, kuphela andiyongcali, kwezemfundo, kwaye ndiye ndafunda ngezithuba ezinje.
Phendula Jorge Rodriguez
Umfoti utyhila abo bangasemva kwemiboniso ebonisiweyo yala maxesha omlingo kwi-Instagram